မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၅)
မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၅)
Posted by မောင်မိုးပြာ on Oct 11, 2011 in Copy/Paste | 20 comments
ထို့ကြောင့် ပိဋကတ်စာပေများကို လေ့လာရန် ပြင်ဆင်ရပါသည်။ ပြင်ဆင်ရာ၌လည်း ဘုရားဟောတိုက်ရိုက်ကိုလေ့လာမည်။ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများကို နောက်ထားမည်။ ပါဠိတော်၌လည်း ပါဠိပိဋကတ်ပါဋိတော်ကို လေ့လာလျှင် စကားလုံးနက်ပြဿသနာ၊ အသွားအလာပြဿသနာ၊ အမိ ဘာသာမဟုတ်၍ နှေးကွေးမှုပြဿနာ အစစများရှုပ်သည်။ မြန်မာပြန် ပိဋ ကတ်များကို မူထား၍ ပါဠိပိဋကတ်ကို အကူထားမည် ဤသို့ ဆုံးဖြတ်လေ့ လာပါသည်။ လေ့လာသောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်များ နား မလည်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍နေသည်ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိလာရပါသည်။ ဇာတ်နိပတ်နှင့် ဓမ္မအဘိဓမ္မာများ၌ မြတ်စွာဘုရား၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို နားလည်၍မရနိုင်အောင် ဖြစ်ရပါသည်။ တမျိုးတဖုံစီ ကွဲပြားအောင် ခြားနား နေသကဲ့သို့ တွေ့ရပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား၏ ဘဝအမြင်၊ လောကအမြင်များသည်လည်း တပည့် တော်များ နားလည်၍မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ကြပါသည်။ တပည့်တော်တို့ သည် လောကိုမြင်ရာ၌၊ လောကသည် မမြဲဟု မှတ်သားထားခဲ့ကြပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် လောကို မမြဲဟု မယူကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ မြဲဟု ယူသလော ဆိုသောအခါ၌လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် လောကကို မြဲသည်ဟု မယူကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်လည်း တပည့်တော်တို့ သည် သတ္တဝါသေပြီးနောက် ဖြစ်မည်ဟုယူဆသော်လည်း မြတ်စွာဘုရား သည် သတ္တဝါသေပြီးနောက် ဖြစ်မည်ဟုမယူကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ တပည့်တော်တို့အမြင်၌ တရားပြီးဆုံးသူများ သေပြီးနောက် နိဗ္ဗာန်ရောက် မည်။ ဘာမျှမဖြစ်တော့ဟုယူသော်လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် မယူကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တပည့်တော်တို့၏ လောကအမြင်နှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ လောကအမြင် မတူပါ။ တပည့်တော်တို့၏ ဘဝအမြင်နှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဘဝအမြင်လည်း မတူပါ။ ဤသို့ မြတ်စွာဘုရားနှင့် အမြင်ကွဲပြားနေခြင်းသည် မသင့်မြတ်ဟု တပည့်တော်တို့ထင်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် အမြင်ကွဲပြား နေခြင်းသည် မြတ်စွဘုရားကို မဖူးမြင်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု တပည့်တော် များ ထင်မှတ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် တပည့်တော်များ ဤမျှ အမြင်ကွဲ ပြားနေသောကြောင့် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်များကို တပည့်တော်များ နားလည်နိုင်လောက်သော အခြေအနေမရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက် မှတ်ယူရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအမြင်ကွာဟချက် ဖျောက်ဖျက်နိုင်ရန် တပည့်တော်တို့ ဦးတည်လိုက်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ လောကကြီး မြဲလည်း မယူ၊ မမြဲလည်း မယူ၊ သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်လည်း မယူ၊ မဖြစ်လည်း မယူသော အမြင်ဖြစ်ရန် သုံးသပ်ရပါသည်။ တပည့်တော်တို့သည် သေပြီးနောက်ဖြစ်သည်၊ တရားပြီး ဆုံးသူ သေပြီးနောက်မူ မဖြစ်၊ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာလောကသည် မမြဲ၊ နိဗ္ဗာန်သည် သာ မြဲသည် ဤသို့ မြင်နေခဲ့ကြပါသည်။ ဤအမြင်ကို ဖျောက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါ သည်။ သတ္တဝါသေပြီးနောက် ဖြစ်သလောဟူသော အမေး၌ မြတ်စွာဘုရား တားမြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် တားမြစ်ရသနည်း။ အမေးမှားလျှင် တားနိုင် သည်။ အမေးမှားသလော၊ ဖြစ်သလောဟူသော ကြိယာမှ ထိုင်၍ ထွက်ကြည့်ပါသည်။ ဖြစ်လောဟူသော မေးရာ၌ အဘယ်အခါ ဖြစ်သလော ဟု မေးသနည်း။ သေပြီးသော နောက်အခါ၌ ဖြစ်သလောဟု မေးခြင်းဖြစ် သည်။ ဤအမေးတွင် သေပြီးနောက်ဟူရာ၌ သတ္တဝါသေခြင်းမရှိလျှင်၊ သေပြီးနောက် ဖြစ်သလောဟူသော အမေး၏ အဖြေလည်း အတားမြစ်ခံရ နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သတ္တဝါ သေသလောဟူသော ပြဿနာကို စီစစ်ရပြန်ပါ သည်။ သေသလော ကြိယာ၏ ကတ္တားဖြစ်သော သတ္တဝါမရှိလျှင်လည်း သေ သလောဟူသော အမေးလည်း အတားမြစ်ခံရနိုင်ပြန်ပါသည်။ နောက်ဆုံး၌ သတ္တဝါဟူသည် အဘယ်နည်းဟူသော ပြဿနာ၌ ဆိုက်လာပါသည်။ သတ္တဝါသည် ခန္ဓာပဉ္စက၏ အမည်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာပဉ္စကသည် အဘယ်နည်း ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဉ်သည် အဘယ့်ကြောင့် ခန္ဓာဖြစ်ရသ နည်း။ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်များသည် တချိန်၌ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်လျှက် ဘယ်သို့ အစုအပုံဖြစ်သနည်း။ စိတ်လည်း ဤနည်းပင် တခုယုတ် ကိုးဆယ်ရှိသော်လည်း တခါဖြစ်လျှင် တစ်ခုသာဖြစ်လျှက် အဘယ်သို့ စုသ နည်း။ အတိတ်ဝေဒနာ၊ သညာ၊ စသည်သည် အတိတ်မှာပင် ချန်ခဲ့ပြီ။ ပစ္စုပ္ပန်ဝေဒနာ၊ သညာနှင့် အဘယ်သို့ စုသနည်း။ စသည်အားဖြင့် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်များ ခန္ဓာလုပ်မရ ဖြစ်ရပါသည်။
ဆက်လက်ဆင်ခြင်သောအခါ ဖြစ်ဆဲရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်သည် မဖြစ်မှီ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အနာဂတ်၊ ဖြစ်ဆဲရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ပစ္စုပ္ပန်၊ ဖြစ်ပြီးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အတိတ်၊ တစ်ခုတည်းသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ပင် ကာလသုံးပါး စုဝေးလျှက်ရှိပါတကား။ အနီး အဝေး၊ အတွင်း အပြင်လည်း ဤနည်းပင် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည် တစ်ခုခုသည် ဝေးသောအရာကိုထောက်လျှင် အနီး၊ နီးသောအရာကို ထောက်လျှင် အဝေး၊ အတွင်းကျသောအရာကိုထောက်လျှင် အပြင်၊ အပြင်ကျသောအရာကိုထောက်လျှင် အတွင်း ဤသို့ပင် တစ်ခုတည်းသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ပင် ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများဖြစ်သော အနီး၊ အဝေး၊ အတွင်း အပြင်များ စုဝေးလျှက်ပါတကား။ ကြမ်းနု၊ ယုတ်မြတ်၌ လည်း ဤနည်းပင်။
ဤသို့ သဘာဝတစ်ခု၌ တစ်ဆယ့်တထွေသော အခြေအနေများ စုဝေးနေကြသည်။ ဤတစ်ဆယ့်တထွေသည်လည်း ချုံလိုက်လျှင် အချိန်ကာလပြ အခြေအနေ၊ နေရာဌာနပြ အခြေအနေ၊ ပြုပြင်ဖြစ်ပွားမှု ပယောဂပြ အခြေအနေဟူ၍ သုံးပါးသာရှိကြောင်း ဆက်၍ထင်မြင်ပါသည်။ ဤအတွေးများမှာ တပည့်တော်များ တွေးမိတွေးရာ ရှောက်၍တွေးနေခြင်း များသာဖြစ်ပါသည်။ ဆက်၍လည်း မဆုံးနိုင်အောင် တွေးပြန်ပါသေးသည်။ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်တို့၏ ခန္ဓအဖြစ် အခြေအနေ၊ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂနှင့် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်တို့၏ လက္ခဏာဖြစ်သော အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တတို့ အစပ်အဟပ်များ ရှိသလောဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အနိစ္စ မမြဲဟူ သည် အချိန်ကာလနှင့်စပ်သော စကားဖြစ်သည်။ ဒုက္ခ ဆင်းရဲဟူသည်လည်း ပြုပြင်မှု ပယောဂနှင့်စပ်သော စကားဖြစ်သည်။ အနတ္တ အနှစ်သာရမရှိဟူ သည်လည်း နေရာဌာနနှင့်စပ်သော စကားဖြစ်သည်။
အနိစ္စ မမြဲဟူသည် အချိန်မရှိမှဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောအချိန်၏ တစ်ဝက်နှင့်စာက မြဲနေဦးမည်၊ ထို့ကြောင့် အနိစ္စဟူသည် အချိန်ကိုငြင်းဆို ချက်ဖြစ်ရမည်။ ဒုက္ခ ဆင်းရဲဟူသည်လည်း ပယောဂမရှိမှ ဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောပယောဂထက် ဆင်းရဲသည်ထက်စာ၍ ချမ်းသာနေဦးမည်၊ ထို့ကြောင့် ဒုက္ခဟူသည် ပယောဂကိုငြင်းဆိုသော စကားဖြစ်မည်။ အနတ္တ သာရမရှိဟူ သည်လည်း သာရတည်ရာဌာန မရှိမှဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောအထည်ကို ထောက်ပြီး တည်ရာဌာနများ ထွက်နေဦးမည်။ ထို့ကြောင့် အနတ္တဟူသည် ဌာနကိုငြင်းဆိုသော စကားဖြစ်မည်။
ဤသို့ တွေးမိသောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂများကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ တပည့်တော်တို့ သည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂများကို လက်ခံခဲ သည်။ အဘယ်သို့နည်းဟူ၍လည်း ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်များ၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂ ရှိ မရှိ သိနိုင်ရန် ထိုရုပ်၊ ဝေဒနာ သညာ စသည်ကို လေ့လာရပါသည်။
စေ့စေ့ငုငု ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ။ ဆက်လက်၍လည်း……………………
View all posts by မောင်မိုးပြာ →
မဝေ့နဲ့ တကြောင်းထဲဖြေကြည့်။ ဘာလို့ “ပြာ” လဲ???????????????????
we ren thu says:
မပာန က အနိုင်ကျင့်လို့ ဆိုတော့ မပာန ဘုန်းဘုန်းတွေက သူတို့ ဆွမ်းသူတို့ စားပြီး အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ အားနွဲ့ သူကို လိုက်အနိုင်ကျင့်သလို ဖြစ်နေပါပေါ့လား ….ဒါဆို မပာန နဲ့တကွ
တစ်နိုင် ငံလုံးက ကိုယ်တော်တွေ မှားပြီး ခဗျားလေးတို့မိုးပြာကပဲ မှန်တာပေါ့
ကိုchitmgခဗျာ သူတို့ မိုးပြာကလေ “ပြာချင်လို့ ကို ပြာနေတာပါဗျာ” အပာင့်အပာင့် လစ်ပြီဗျို့တော်ကြာ အားနွဲ့ သူကို အနိုင်လာကျင့်နေပါဦးမယ် သူတို့ ရဲ့ ထောင်ထဲက ဘဘဘုရား လေး ဥာဏအားကိုးနဲ့ လေ
တရားမသိသူဟာ သူများအားကိုးတာသေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဘုရားစေတီတွေ၊ စွယ် တော်တွေ၊ ဓာတ်တော်တွေ ပေါကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနှင့် လူလည်တွေရဲ့ လှည့်ပတ်မှုကို ခံရတာပေါ့။ ဒါဟာ အားကိုးတွေမဟုတ်လား။
တရားသိသူကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးတယ်။ သူများအားကိုးနှင့် မလုပ်တာသေချာတယ်။ တထစ်ရှိ ဘုရား၊ တထစ်ရှိ သံဃာတော်စသည်ဖြင့် အားကိုးနေရတာမဟုတ်လား၊ ဘုရားစေတီ ဆိုတာ ဘုရားကို ဂုဏ်ပြုပူဇော်ဖို့အတွက်ပါ။ ကိုးကွယ်အားထားဖို့ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသာရှိနေရင် အလားကောင်တွေလို့ ပြောမှာသေချာတယ်။ ဒါကတော့ ဘုရားက ရဟန်းတစ်ပါးကို ပြောတဲ့ စကားလေးပါ။ တရားမြင်မှ ဘုရားမြင်မယ်၊လို့ပေါ့။ ဘုရားက လမ်းညွန်ပြသသူသာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်ဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အားကိုးနေတာဟာ လူပျင်း လူဖျင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။
“မြတ်စွာဘုရား၏ ဘဝအမြင်၊ လောကအမြင်များသည်လည်း တပည့် တော်များ နားလည်၍မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ကြပါသည်။” ဗုဒ္ဒအဖြစ်သို့ရောက်ပြီး တဲ့အခါမှာ လူတွေရဲ့ အမြင်နဲ့ ဗုဒ္ဒရဲ့ အမြင်က ထပ်တူမကျတော့ဘူး။ နားလည်ချင်ရင် သူရဲ့ အဆုံးအမတွေကို သဘောပေါက်အောင် နားထောင်ပြီး နားလည်ဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားမှရမယ်။
မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ကျုပ်တို့ လူတွေနဲ့ အမြင်ကွဲပြားတယ်။ ဒါကို မသင့်တော်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားကို မဖူးမြင်လိုက်ရခြင်းကြောင့် နားမလည်ဘူး လို့ရေးပြတာ ခပ်ကြောင်ကြောင် စာရေးတာပဲဗျာ။ ဒီဘက်ခေတ် လူတိုင်း မြတ်စွာဘုရားနဲ့ မတွေ့ထိလိုက်ရဘူး။ လုပ်စရာ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ သူ့အဆုံးအမကို နားထောင် လေ့လာ စာဖတ် ..ဒီ့အပြင် ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ ဒါအကောင်းဆုံးပဲ.. ရှင်းတယ်နော်။
ခပ်ကြောင်ကြောင် ရေးတာတွေ ကိုပြောဖို့ တစ်နည်းပဲရှိတယ်။ ခင်ဗျား အိုင်စတိုင်းရဲ့ ရီလေးတစ်ဗတီ ကို အကုန်နားလည်လား၊ စတီဗင်ဟော့ဖ်ကင်း တွေ့ရှိချက်တွေ ကိုနားလည်လား။ ကွမ်တန်သီအိုရီကို နားလည်လား။ ဘယ်လိုနားလည်လဲ။ ကျုပ်တို့တော့ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တွေ့ရှိချက် ဆိုတာတွေဟာ လူတွေအကုန် နားလည်ဖို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လူတချို့ ပဲနားလည်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ပဲ နားလည်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အစိတ်အပိုင်း နည်းနည်းလောက်ပဲ နားလည်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်မယ်။
ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တွေကို အကုန်နားလည်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဗုဒ္ဒက ဧဟိပသိ ..လာလှည့်ရှုလှည့်လို့ ရေးထားတယ်။ ခင်ဗျားတို့မိုးပြာက တောလိုလို တောင်လိုလိုနဲ့ စကားလုံးတွေ လှည့်ပတ်ပြီး ရေးသားချက်တွေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
ဗုဒ္ဒက စိတ်ကိုအဓိကထားဟောတယ်။ စိတ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေက စကားလုံးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရင် စကားလုံးအဆင့်၊ စာနဲ့ချရေးရင် စာလုံးအဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ လက်တွေ သဘောပေါက်တာလည်း လူတစ်ယောက် သဘောနဲ့ တခြားတစ်ယောက် သဘော တူတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အဲ့ဒီတော့ လေ့လာတယ်ဆိုတာ စာဖတ်ရုံနဲ့ သူများစကားပြောတာ နားထောင်ရုံနဲ့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် မိုးပြာက ရေးတဲ့ စာမှန်သမျှ.. တန်ဖိုးမရှိဘူး။ ရှင်းတယ်နော်..။
စာဖတ်တာ စကားပြောတာတွေကို အချီးအနှီးလို့ ယူဆလျှင်တော့ ပိဋကတ်ဆိုတာ ဘာလို့သင်နေစရာလိုအုံးမှာလဲ။ တရားတွေလည်း နာနေစရာလိုအုံးမှာလား။ စကားတွေကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောဖို့လိုမှာပါ။ အိုင်းစတိုင်းတို့၊ စတီဖင်ဟော့ကင်းတို့ဆိုတာ လောကထဲမှာ တကယ်ရှိနေတာတွေကို စာပေအဖြစ် နည်းပညာအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့လို့သာ လူတွေ သိခွင့်ရကြတာမဟုတ်လား။ စကားတွေ စာတွေဟာ လူတွေကို ကောင်းအောင် ဆိုးအောင် မတတ်နိုင်ကြဘူးလို့များ kyawza မှတ်ယူလိုတယ်ဆိုလျှင် ဘာစာ ဘာစကားမှ နားမထောင်ပဲ တစ်ပတ်လောက်နေကြည့်စေချင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကို နားမလည်ဘဲနဲ့ ဘာကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှာလည်း …လိုက်နာ တယ် ကျင့်ကြံတယ်ဆိုတာ သိပြီးမှ လိုက်နာ ကျင့်ကြံလို့ ရတာပါ။ သစ္စဥာဏ်(ဘယ်ဟာ ဒုက္ခလို့ အမှန်အတိုင်း မသိသေးပါပဲ)နဲ့ ကိစ္စဥာဏ်( ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ အမှန်အတိုင်းကျင့်) လို့ ရတယ်ဆိုလျှင် ဘာ့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခအရိယသစ္စာ တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲ သစ္စဥာဏ်၊ ကိစ္စဥာဏ်၊ ကတဥာဏ်ဆိုပြီး ဟောခဲ့မှာလည်းပေါ့။ kyawza ဟာ မန္တလေးဂေဇက် ကို ဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်လို့ အရင်ဆုံးသိပြီးမှ ဖွင့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်လို့ရတာမဟုတ်လား။ ဒီနေရာ မှာတင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသွားပြီဆိုတာ သေချာပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဧဟိပဿိက က လူတိုင်းမှာ ဖြစ်ခွင့်ရှိတာလား ရှိရော ရှိနေကြပြီလား။ ဗုဒ္ဓဘုရားနောက်ကလိုက်နေကြပါတယ်ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ထားတော်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေကြတာ အတွက် များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိရပါတယ်။
ပိဋကတ်တော်တွေသင်ယူလေ့လာခြင်း၊ တရားနာယူခြင်း၊ တရားစကားပြောခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း စသည်တို့မည်သည် အချီးအနှီးမဟုတ်ဘူး။
နားလည်သဘောပေါက်မှု ဆိုတာ အဓိကပဲ။ ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တွေကိုလိုက်နာသူ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ဆိုတာ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ဒတရားတော်တွေကို လေ့လာတဲ့လူတွေ သဘောပေါက်တဲ့ အဆင့် ဆိုတာ လေ့လာရုံနဲ့ မရနိုင်ဘူး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့၊ ရင့်ကျက်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိမှ လက်ခံသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာ။
ပစုပန်ကံမက ခင်ဗျားတို့ ချပြတာတွေမှာ “သစ္စဥာဏ်(ဘယ်ဟာ ဒုက္ခလို့ အမှန်အတိုင်း မသိသေးပါပဲ)နဲ့ ကိစ္စဥာဏ်( ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ အမှန်အတိုင်းကျင့်)” ဒီစကားလုံးတွေက စကားနဲ့ပြောရင် စကားပဲ အဖြေထွက်တယ်။ ခင်ဗျား လည်းစကားလုံးတွေအဖြစ်ပဲ သိထားတယ်။ ..ဒါဆို အနှစ်သာရ တကယ့် တရားကို အဖြေရှာလို့ရနိုင်ရဲ့လား။
နောက်တစ်ခု လုံးထွေး ချတာ တွေ ပစုတ်ပန်ကံမ၀ါဒ သမားတွေ အတော်လုပ်ကြတယ်။ အောက်မှာ..ခင်ဗျားပြောတဲ့ “စာဖတ်တာ စကားပြောတာတွေကို အချီးအနှီးလို့ ယူဆလျှင်တော့ ပိဋကတ်ဆိုတာ ဘာလို့သင်နေစရာလိုအုံးမှာလဲ။”
ဒီစကားလုံးတွေက လုံးထွေး လှည့်ပတ်ပြီး စကားနိုင်လုပြောတဲ့ အဆင့်အတန်းမှာပဲရှိတယ်ဗျ။
ဧဟိပသိက ဆိုတာ လူတိုင်းမှာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဖြစ်ရောဖြစ်နေတယ်။ ပစုတ်ပန်ကံမ၀ါဒကို သံဃနာယက က နှိပ်ကွပ်တယ်။ အစိုးရက နှိပ်ကွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားယုံကြည်နေရင် ခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာ ကိန်းဝပ်နေရင် ဒါအိုကေတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ သံဃနာယက အဖွဲ့၊ ခင်ဗျားတို့ ပစုတ်ပန်ကိုနှိပ်ကွပ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တရားတွေကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှု၊ ဘာသာတရားကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သလား။ နေရာတစ်နေရာ လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အတင်းလိုက် ကြော်ငြာပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ တကယ့် သက်ဝင်ယုံကြည် သူလား။
ဗုဒ္ဒအဆုံးအမကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကျင့်ကြံဖို့က ရင့်ကျက်မှု ဆိုတာလည်းပါတယ် ဆရာသမားရဲ့။ လူတိုင်းမတူညီတဲ့ ကုသိုလ်ကံမှာ ရှိတယ်။ တစ်ယောက်နားလည်တာကို တစ်ယောက် နားမလည်ကြဘူး။ အစစအရာရာ မတူညီကြဘူး။
စကားလုံးအရ စွတ်ပြီး ဖောင်းပွ၊ စကားလုံးနဲ့ ပြောဆိုစဉ်းစားမှုကို အတင်းချပြတာမျိုး ဗုဒ္ဒအဆုံးအမကို တကယ်မသိနိုင်ဘူး။ ကဲပါလေဗျာ.. ဧဟိပသိကော ဆိုတိုင်း လူတိုင်းချပြ လူတိုင်းကြော်ငြာပြရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဒတရားတွေက လူစုလူဝေးနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့ တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ mass religion မဟုတ်တဲ့အတွက် ထားပါတော့ဗျာ။ ဆက်မရေးတော့ဘူး။
ဧဟိပသိက ဆိုတာ လူတိုင်းမှာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဖြစ်ရောဖြစ်နေတယ်။ ပစုတ်ပန်ကံမ၀ါဒကို သံဃနာယက က နှိပ်ကွပ်တယ်။ အစိုးရက နှိပ်ကွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားယုံကြည်နေရင် ခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာ ကိန်းဝပ်နေရင် ဒါအိုကေတယ်။ဆိုတဲ.အပုဒ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါဗျာ
ဘုရားရဲ့တရားဟာ လူတိုင်းကျင့်လို့ မရဘူးလို့ ဆိုလိုချင်ပါသလား။ စကားပြောတယ်ဆိုတာ ဘာ့အ
တွက်ပြောတာလို့ထင်ပါသလဲ။ တကယ်လိုက်နာလို့မရတဲ့စကားတွေဆိုရင်တော့ ငြင်းခုံနေရမှာပါပဲ။ မောင်မိုးပြာတို့ပြောနေတာက
သိနိုင်သူတွေ သိကြပါစေတော့ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ လောကရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုတင်ပြပေးနေတာပါ
စကားပြောတယ်ဆိုတာ တကယ်အလုပ်ဖြစ်တာကိုပဲ ပြောရမှာမဟုတ်လား။
ဟုတ်ကဲ့…သူတို့ အစား ကျုပ် နားလည်ပါတယ် ခင်ည….။
အကုန် လွှတ်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ၊ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ပေးရတာမှ မဟုတ်တာ။
by The Voice Weekly on Wednesday, 12 October 2011 at 11:32
စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ဇာဂနာနှင့် ပူပူနွေးနွေး တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူအသေအပျောက် အများဆုံးနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အကြီးမားဆုံး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရသော နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ် ခံစားနေရသော ပြည်သူများကို ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရသူ စွယ်စုံရ ဟာသအနုပညာရှင် (ဦး) ဇာဂနာ (ခေါ်) ကိုသူရမှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ရာ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်က မြစ်ကြီးနား လေယာဉ်ကွင်းသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် The Voice Weekly က တယ်လီဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကနေ ဘယ်နှစ်ယောက် လွတ်လာပြီလဲ။
– စုစုပေါင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄ ဦး၊ အချို့တစ်ဝက်ပေါ့။
– ကျွန်တော်၊ ကိုဇင်မင်းထွန်း၊ ဦးမျိုးအောင်သန့်၊ ဦးတင့်ဆန်း
ခုလောလောဆယ် သူတို့ လေယာဉ်ကွင်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်လာမှာလဲ။
– မြန်မာ့လေကြောင်း ဂျက်လေယာဉ်နဲ့။ တစ်နာရီကို ရန်ကုန် ဆိုက်မယ်။
– လောလောဆယ် ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီး တိုင်ပင်ပြီးတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆုံးဖြတ်မယ်။
လွတ်လာတဲ့အပေါ်မှာ မလွတ်ခင် တစ်စုံတစ်ရာ ညှိနှိုင်းတာမျိုး ရှိလား။
လွတ်လာချိန်မှာ အနှောင်အဖွဲ့ တစ်ခုခု ရှိလား။
အရင်လို နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်အတွက် ဆက်လုပ်တာမျိုး လုပ်ဖို့ ရှိလား။
– လုပ်မှာပါ။ နဂိုဗီဇ ဝါသနာအရ အစကတည်းက ဝါသနာပါတယ်။ လိုချင်တာတွေ ရအောင် ပြီးဆုံးတဲ့အထိ လုပ်မယ်။ မသေမချင်းပေါ့။
အစိုးရသစ်ကို Information တွေအရ ဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲ။
– ကျွန်တော် သုံးသပ်တာက အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးပဲ။ ဒါမျိုးမှာ မကျေနပ်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ ကောင်းအောင် အရမ်းအော်ထားတယ်။ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ စာစောင်တွေထဲမှာ ဖော်ပြထားတယ်။ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တင်ပြတာကို တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ထောက်ခံတယ်။ လူလေး သုံးလေးယောက်ပဲ လွှတ်တာ ကျန်တာတွေ ဘာလို့ မလွှတ်သေးတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့က ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓားပြတွေ လက်ထဲ ရောက်နေတဲ့လူတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အကုန် လွှတ်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ အဲဒီအတွက် စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။ ဒါကိုတော့ သမ္မတကို တိုက်ရိုက်ပြောချင်တယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ အိတ်ထဲက စိုက်ပေးရတာမှ မဟုတ်တာ။
အခု အဲဒီမြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှာ ဘယ်သူတွေ ကျန်သေးသလဲ။
– မြစ်ကြီးနားက စုစုပေါင်း ဘုန်းကြီးလေးပါး ကျန်တယ်။ အဲဒီကိုယ်တော်တွေက မန္တလေးက ဆရာတော်တွေ၊ မန္တလေးက ဆရာတော် ဦးဉာဏ၊ ဦးဝီရသူ၊ ဦးဂန္ဓသာရ၊ ဦးဓမ္မသာမိ။ လူတွေထဲက ကိုမျိုးမင်းသန့်၊ ကိုကြည်တိုး၊ ကိုဇေယျအောင်(ပဲခူး)၊ ကိုသီဟသက်တင် (ဘိုကလေး)။
ဒီလူတွေက စာရင်းထဲ မပါတာလား။ မလွှတ်သေးတာလား။
– ကျွန်တော်သိတာတော့ ဒီနေ့အထိပဲ။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာ ပိတ်သွားပြီ။
အသုတ်လိုက်လွှတ်မယ်လို့ ပြောနေသံ ကြားတယ်။ ဟုတ်သလား။
– မဟုတ်ဘူး ကောလာဟာလ တွေပါ။ အသုတ်ရော၊ ရေကြည်ရော၊ ငါးသိုင်းချောင်းတွေရော ကောလာဟလတွေပါ။ မျက်မြင်ကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ဘယ်လိုပြောပြော လက်မခံဘူး။
လွတ်လာချိန်မှာ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိသလား။
– ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စ ဆက်ပြောဦးမယ်။ တောင်းဆိုထားတဲ့ ကိစ္စတွေကို၊
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးမှာ အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်တဲ့ကိစ္စမှာ တစ်ချို့ကို လွှတ်တဲ့ကိစ္စက တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ ဘယ်လို အမြင်လွဲစေသလဲ။
– အားလုံး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြမယ်ဗျာ။ မယုံမကြည် ဖြစ်မယ်။ လွတ်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် မယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့ ဒီလို လုပ်တယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင်တော့ဘူး။ ဖြစ်စေချင်တာက လွှတ်လိုက်ပါလား အကုန်လုံး။ ကိုယ်လက်ထဲမှာ ကျူးလွန်ထားတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ ဦးသန်းရွှေ လက်ထဲမှာ ကျူးလွန်လို့ ချခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေ၊ ဒီအမှုတွေကို ပယ်လိုက်ပါ။ လွှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ပေးရတာမှ မဟုတ်တာ။ ပိုပြီးတော့ စေတနာကို သဘောပေါက်မယ်။ ကျေနပ်မယ်။ လက်ကမ်းတယ်ဆိုတာ သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတာက အာဏာရှိတဲ့သူနဲ့ နေရာ အပေါ်က ရောက်တဲ့သူပဲ သဘောထားကြီးနိုင်တယ်။ ဘယ် သူတောင်းစားကမှ အပေါ်ကို သဘောထား မကြီးနိုင်ဘူး။
တိုင်းပြည်ကို လက်တွဲ လုပ်မဲ့လူတွေပဲ လွှတ်မယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်မဲ့လူတွေလို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လူတွေ မလွှတ်ဘူး ပြောနေတယ်။ အဲဒီအတွက် လူရွေးပြီး လွှတ်တာလား။
– လက်တွဲနိုင်တယ်၊ မတွဲနိုင်ဘူး ဆိုတာ လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား။ … မလုပ်ရသေးဘူး။ မြက်စားနေတာမှ မဟုတ်တာ။ လက်တွဲဖို့ မလိုပါဘူး။ လက်တွဲရင် လက်ကမ်းမှာပါပဲ။ လက်ကမ်းဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ပါနေတယ်။ အိုဘားမား ပြောသလို ကျွန်တော်တို့က လက်ဖြန့်ထားပါတယ်။ လက်ဖြန့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့က တောင်းစားနေတာ မဟုတ်ဘူး။
ဘာများ ထပ်ပြောချင်တာ ရှိသေးလဲ။
– မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အသံတွေ နာနေပါပြီ
(လက်ကမ်းတယ်ဆိုတာ သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတာက အာဏာရှိတဲ့သူနဲ့ နေရာ အပေါ်က ရောက်တဲ့သူပဲ သဘောထားကြီးနိုင်တယ်။ ဘယ် သူတောင်းစားကမှ အပေါ်ကို သဘောထား မကြီးနိုင်ဘူး။) good တယ် ကိုဇာဂနာ
အဲဒါ နိုင်ငံရေးတင်မက ကျန်တာအားလုံး အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးတွေမှာပါ သဘောထားကြီးဖို့ လိုပြီ။ အတင်းအနိုင်ကျင့်လို့ ရတယ်ထင်တိုင်း ဘာသာရေးမှာ ဖိနှိပ်တာ အဲဒါ တရားလား။
ဒီပိုစ်တင်တဲ. “မောင်မိုးပြာ” စာတွေတင်ပဲတင်တာ လား
၀င်ေ၇ာက်ှေဆွးနွေးတာ ဘယ်ပို.စ်မှာ မ မဖတ်၇သေးဘူး
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မသိဖူးသေတဲ့ အသိတွေ၊ မတွေးဖူးသေးတဲ့ အတွေးတွေကို သိနိုင် တွေးနိုင်ကြပြီး လူတွေဆီမှာ မလိုအပ်ပဲ ဝန်ပိုတွေ ပိနေတာကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ကြစေချင်တဲ့ စေတနာအပြည့်နဲ့တင်ပြပေးနေတာပါ။ အချိန်သိပ်ပြီး မပေနိုင်တာကြောင့် ရတဲ့အချိန်မှာပဲ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမို့ပါ။
အားလုံးရဲ့ ကော်မန့်တွေစုံမှ အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီး “သူ”ဆွေးနွေးတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ့ရလေ့ရှိတာပဲဗျ။
ကိုမိုးပြာရေ သစ္စဥာဏ်တွေ ကိစ္စဥာဏ်တွေ ပြောရအောင် တိုတို့ရဲ့ ပါးစပ်က မတန်သေးပါဘူး
ခဗျားလေးတို့ ရဲ့ ငါးပါးသီလအယူအဆမှာတောင် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းခိုးတာ အကုသိုလ်မပာုတ်ဘူး
အရက်ကို ကြိုက်သလောက်သောက် မမူးရင်ပြီးရော ဘုရားက ဘုရားဖြစ်ပြီးတာတောင် မာရ်နတ်ရဲ့ သမီးတွေ အပေါ် ကာမစိတ်သင်သေးတယ် စတဲ့စတဲ့ အင်မတန်ကြောက်စရာ ကိစ္စတွေအပြင် ပိာု ဘယ်ဘုရားက sponsor ပေးထားမှန်းမသိတဲ့ အပြာရောင်ဝတ်စုံကြီး ကားယားကားယားနဲ့ ဘဲကလည်း သူ့ ကိုယ်သူ အနုဗုဒ္ဓတဲ့ဗျာ တော်တော်ဘုရားရူးရူးနေတဲ့သူပဲထင်တယ်
ကိုယ့်လူရေ အပြာဝတ်တာ၊ အ၀ါဝတ်တာတို့နှင့် ဘုရားတပည့်အဖြစ် တိုင်းတာမှာလား၊ ခင်ဗျား တို့ ကျုပ်တို့တွေက ဘာဝတ်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘုရားတရားကို ကြားနာခဲ့ရလို့ မဟုတ်ပါလား။ ဂျပန်တို့၊ တရုတ်တို့မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုရားတပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာနှင့် အထောက်အထားပြမလဲ၊ ဘုရားက အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်သိမ်တွေကို ပြောနေသူလား၊ တရုတ် ပြည်ကစွယ်တော်ကို မဟာယာနဘုန်းကြီးစောင့်ရှောက်ထားတာ၊ ထေရ၀ါဒကသွား ပြီး ချော့ရတာ ၊ ဒါကအဓိကမကျပါဘူး၊ အသိတူ၊ အမြင်တူ၊ အကျင့်တူ ဖြစ်ဖို့ သင်္ကန်းဝတ်ကြတာ၊ မြန်မာပြည်မှာသာ အ၀တ်တို့ ၊ အသားအရောင်တို့ ၊ အဆင့်အတန်းတို့ ခွဲခြားကြတာပါ၊ ဘောလုံးသမားတွေတောင် လူမျိုးရေးခွဲခြားရင် အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာ သိသင့်ပါတယ်။ အဓိက တရားကိုသိဖို့နှင့် ကျင့်ဖို့ပါပဲ၊ လွတ်ချင်ရင်ကျင့်၊ ဒါပဲလို့ပြောပါရစေ။
ပြောတတ်တဲ့ဘက်ပဲ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့ လေ—အဲဒီအပြာဝတ်တဲ့ကိစ္စကို စကားလုပ်လာပြောနေတယ် ဗျာ——-ပြောလို့ ကောင်းတဲ့စကားပဲ ပြောမျနနဲံ့ ဦး — ဗို၇ံ တို့ေ၇းထားတာအများကြီး -တခြားစကားတွေကျန်သေးတယ် -ဖြေ၇ှင်းချင်၇င် အကုန်ဖြေ၇ှင်း—–အင်္ကျီဝတ်တဲံ့ကိစ္စကိုေ၇းကြီး ခွင်ကျယ် လုပ်နေစ၇ာမှမလိုတာဗျာ…………—(အဲ့ဒီဘဲ ၀တ်ဝတ်မ၀တ်ဝတ်–တုံးလုံးပဲနေနေဗျာ
“ခဗျားလေးတို့ ရဲ့ ငါးပါးသီလအယူအဆမှာတောင် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းခိုးတာ အကုသိုလ်မပာုတ်ဘူး
အရက်ကို ကြိုက်သလောက်သောက် မမူးရင်ပြီးရော ဘုရားက ဘုရားဖြစ်ပြီးတာတောင် မာရ်နတ်ရဲ့ သမီးတွေ အပေါ် ကာမစိတ်သင်သေးတယ် စတဲ့စတဲ့ အင်မတန်ကြောက်စရာ ကိစ္စတွေ” ဆိုတဲ့ စာတွေကို တော့ မဖတ် မိတာလား မဖတ်တတ်တာလား ???????????????
ကိုယ့်လူရေ အပြာဝတ်တာ၊ အ၀ါဝတ်တာတို့နှင့် ဘုရားတပည့်အဖြစ် တိုင်းတာမှာလား၊ ခင်ဗျား တို့ ကျုပ်တို့တွေက ဘာဝတ်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘုရားတရားကို ကြားနာခဲ့ရလို့ မဟုတ်ပါလား။ ဂျပန်တို့၊ တရုတ်တို့မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုရားတပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာနှင့် အထောက်အထားပြမလဲ၊ ဘုရားက အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်သိမ်တွေကို ပြောနေသူလား၊ တရုတ် ပြည်ကစွယ်တော်ကို မဟာယာနဘုန်းကြီးစောင့်ရှောက်ထားတာ၊ ထေရ၀ါဒကသွား ပြီး ချော့ရတာ -ဆိုတဲ့ ဟာလေးတွေဟာလေ ဟာလေ ———-
ကလေးတွေ စကားနိုင်လုပြောတဲ့အဆင့်တောင်မှ ဒီထက်သာသေးတယ်ဗျာ————-ဟုတ်တာပေါ့
မှန်တာပေါ့ အပြာဝတ်ဝတ် အ၀ါဝတ်ဝတ် ဘာဆိုင်လဲ –မဆိုင်လို့ ပဲ အပြာဝတ်၇ုံနဲ့ ဘာသီလ ဘာဝိနည်းမှ မ၇ှိတဲ့ဘဲ–ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနုဗုဒ္ဓလို့ ပြောတဲ့ဘဲ —ကို မှ ကိုယ့်လုူတို့ လို လူတွေက ဘု၇ားထူးချင်ကြတာပေါ့
( ကုလေးကုလားလို စကားနိုင်လုချင်၇င် အိမ်က ခွေးလေး လွှတ်လိုက်မယ်လေ သူ့ ကို လူစကားသင်ပေးပြီးတော့ —–ဒါမှမဟုတ်လည်း dog language နဲ့ ပဲပြောကြလေ –မိုးပြာကလူတွေ အဲ့ဒီ language တတ်နေတာပဲ) account က —-doggymoepyar@ awisi.com—–